भाग्यमानी हुन चाहिने ५ गुण, तपाईंसँग कुन कुन छन् ? – All top Here
Home/समाचार/भाग्यमानी हुन चाहिने ५ गुण, तपाईंसँग कुन कुन छन् ?
भाग्यमानी हुन चाहिने ५ गुण, तपाईंसँग कुन कुन छन् ?
मेहनतीको भाग्य सँधै चम्किलो हुन्छ । अर्थात मेहनत गर्ने मान्छे नै भाग्यमानी हुन्छन् । भाग्यमामात्र भर पर्दा आफ्ना इच्छा, चाहाना र आकांक्षा पूरा नहुन सक्छन् ।
तर, विभिन्न धर्मग्रन्थमा समावेश आख्यानका अनुसार भाग्यमानी हुनका लागि पनि आवश्यक गुण चाहिन्छ । महाभारतमा विदुरले भनेका छन्–यदी कुनै मासिनको जीवनमा तल उल्लेखित ५ कुराहरु छन् भने उ भाग्यमानी हो ।
धन, निरोगी शरीर, सुन्दर पत्नी, आज्ञाकारी पुत्र र धनप्राप्त गर्ने विद्या यी ५ कुराले मानिसलाई सुख दिन्छ ।
धन : जीवन सुखसँग चल्नको लागि धन सम्पत्ति हुनु अति आवश्यक छ । बिना धन सम्पत्ति न नाम रहन्छ, न मान सम्मान नै मिल्छ । न त दैनिक गुजारा नै चल्छ । पाइला पाइलामा धनको आवश्यक पर्छ । त्यसैले धन भयो भने सुख प्राप्त गर्न सहज हुन्छ ।
निरोगी शरीर : भनिन्छ स्वास्थ्य नै धन हो । जीवनमा सुखी रहन शरीर स्वस्थ हुनु अत्यन्तै जरुरी छ । यदी शरीरमा कुनै रोग छ भने सँधै त्यसले पिरोल्छ र कुनै पनि काम गर्न कठिन हुन्छ । राम्रो सँग कुनै पनि काम समेत सकिदैन । स्वस्थ्य शरिर छ भने जता गएर पनि तपाईं भनेजस्तो काम गर्न सक्नुहुन्छ ।
सुन्दर पत्नी : महाभारतमा महात्मा विदुरले भनेका छन- सुन्दर श्रीमती हुनु पनि एक प्रकारको सुख हो । कारण घरमा सुन्दर पत्नी हुनाले तपाईंको ध्यान बाहिर भड्किदैन । घरमा श्रीमतीसँग हुने व्यवहारबाट तनाब मुक्त भएपछि तपाइको अन्य बाहिरका अन्य व्यक्तिसँग सम्बन्ध रहँदैन र अनेकौ समस्याबाट बच्न सक्नु हुन्छ ।
आज्ञाकारी पुत्र : सबैभन्दा ठूलो समस्या सन्तान हो । सन्तान यदी गलत बाटोमा गयो भने यसको दोष बुबा आमालाई जान्छ । सन्तान विद्वान् र ज्ञानी हुन भनेको वपन ठूलो सुख हो ।
धन प्राप्त गर्ने विद्या : पैसा भन्ने कुरा त आउँछ जान्छ यो संसारकै नियम हो । कतिपय मानिस आफ्नो भएको पैतृक सम्पत्ति अनियन्त्रित रुपले खर्च गर्छन् र कंगाल बन्छन् । यस्तो स्थितिबाट बच्नको लागि तपाई पनि ज्ञान हुनु जरुरी छ । अर्कातिर तपाईंसँग कला छ विद्या छ र तपाईंको व्यवसाय राम्रो छ भने निरन्तर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ र तपाईं खुसी रहन सक्नुहुन्छ ।
१६ वर्षीया श्रीमतीलाई करणी गर्न सघाउने श्रीमान पक्राउ
दुधजन्य शिशु आहारमा ‘वि’ष’ मिसाउन सरकारको अनुमति